Miyuu Martin Odegaard Lasii Joogi Doonaa Kooxda Arsenal
HomeWararka Ciyaaraha Maantamiyuu Martin Odegaard lasii Joogi doonaa kooxda arsenal
February 15, 2021 Wararka Ciyaaraha Maanta 0
Martin Odegaard wuxuu furay suurtagalnimada ah inuu si rasmi ah uga dhaqaaqo Real Madrid una dhaqaaqo Arsenal iyadoo ciyaaryahanka khadka dhexe ee Norwey uu qirtay wax walba inay macquul tahay.
22 jirkan ayaa ku biiray kooxda Gunners inta lagu gudajiray suuqa kala iibsiga jiilaalka heshiis amaah ah oobku eg ilaa dhamaadka xilli ciyaareedka.
Waxa uu saftay kulankiisii ugu horeysay ee Premier League markii ay 4-2 kaga badiyeen Leeds isagoo labo kulan ka soo muuqday kursiga keydka, mana jiro wax meesha ka saaraya mustaqbalkiisa.
Markii TV2 laga weydiiyay inuu sii joogi karo Arsenal wixii ka dambeeya dhamaadka xilli ciyaareedkii 2020-21, Odegaard wuxuu yiri: “Waligaa ma ogaan kartid waxa dhici doona laakiin hadda waxaan kaliya diirada saarayaa inaan sida ugu fiican u ciyaaro xilli ciyaareedkan iyo inaan caawiyo kooxda intii suurtagal ah.”
Mikel Arteta ayaa kubad sameeyaha u rajeeyay waqti fiican isagoo doonaya inuu hal abuurnimo ku soo daro kooxda Arsenal Ku guuleystaha Koobka Adduunka Mesut Ozil wuxuu ku guda jiray hawlihii lagu hubin lahaa inuu u wareego Fenerbahce, taasoo ka dhigeysa Gunners inay ka gaabiyeen xulashooyinka kaalinta 10aad.
Emile Smith Rowe oo ka qalin jabiyay akadeemiyada ayaa ku raaxeysanayay olole horumarineed oo waqooyiga London ah, laakiin waa 20 sano jir wuxuuna u baahan yahay tartan iyo loolan.
Odegaard ayaa taas bixisay, iyada oo dareenkii hore ee dhallinta yar lagu fududeeyey garoonka Emirates Stadium Waxa uu ciyaaray 110 daqiiqo oo kubada cagta Premier League ah seddex kulan oo uu u muuqday mid ku fiican kubada ka hor inta uusan bedelin Mohamed Elneny qeybtii labaad ee guushii ay ka gaareen Leeds.